Indostria 5 novaina tanteraka tamin'ny Internet | Martech Zone
Alakamisy Oktobra Oktobra 22, 2015 Douglas Karr
Ny vidim-baovao dia misy vidiny tokoa. Misy fiantraikany ratsy amin'ny orinasan'ny taxi i Uber. Misy fiantraikany amin'ny radio sy mozika amin'ny media nentim-paharazana ny radio Internet. Misy fiantraikany amin'ny sarimihetsika nentim-paharazana ny horonan-tsary fangatahana. Fa ny zavatra hitantsika dia tsy a famindrana ny fangatahana, izany fangatahana vaovao.
Milaza amin'ny olona foana aho fa ny zava-mitranga dia tsy famonoana orinasa iray hafa, fa ny indostrian'ny nentim-paharazana dia voaro amin'ny tombom-barotra azony ary namono tena tsimoramora. Antso ho an'ny orinasa nentim-paharazana fa tsy maintsy mampiasa vola amin'ny haitao vaovao izy ireo raha manantena ny tsy ho voafandrika amin'ny farany.
Tao anatin'izay roapolo taona lasa izay, ny revolisiona amin'ny Aterineto dia nanimba ny fomba fiasa nentin-drazana fa namorona indostria iray manontolo miaraka amina fotoana tsy tambo isaina hanaovana fanavaozana.
CompanyDebt dia namorona an'ity infographic ity, Mivoatra na maty: Indostria 5 novaina amin'ny Internet amin'ny Internet, izay manome topy maso ny indostrian'ny mozika, ny indostrian'ny varotra, ny indostrian'ny famoahana, ny indostrian'ny dia ary ny indostrian'ny fitaterana.
Tags: indostriafanovana InternetMusicPublishingantsinjaranyfitateranaTravel
Wrike: Ampitomboy ny famokarana, ny fiaraha-miasa ary ampidiro ny famokarana atiny